Firavaka volamena manodidina ny 8 tapitrisa ariary sy lelavola roa tapitrisa ariary no lasan’ny jiolahy mora foana.
« Jiolahy iray nisaron-tava, niaraka tamin’ny antsy, no niditra an-tsokosoko tao amin’ilay trano. Resin-tory ilay mpiambina ny tanàna. Nisy namoha tamin’ny fanalahidy ilay trano ka avy hatrany dia ny kaonteran-jiro no novonoin’ilay jiolahy. Andeha hijery ilay kaontera ilay tale, tompon’ny trano izay tavela irery tao an-trano, no nifanena tamin’ilay jiolahy teo an-dalantsara », hoy ny loharanom-baovao.
Voaambana antsy izy ka tsy afa-nanohitra ary nofatoran’ilay jiolahy. Efa hitan’ity farany avokoa avy eo ny toerana rehetra misy ireo firavaka volamena sy ny fitoeram-bola. Nitsoaka mora foana izy taorian’izay.
Raha ny tatitra avy amin’ny zandary dia tamin’ny 5 ora maraina no nahazo ny antso tamin’ny tompon-trano izy ireo. Efa tsy tratra intsony ny mpandroba.
Ilay mpiambina no natao famotorana. Voasambotra omaly teny Ivato ihany anefa io jiolahy io, izay tsy iza fa mpiambina teo aloha tao amin’ilay tanàna ihany. Efa manana ny fanalahidin’ilay trano izy ireo. Mbola tratra tany aminy avokoa ireo entna very rehetra.